Nezvedu - Dongguan Yong Fang Electronics Technology Co., Ltd.
Dongguan Yong Fang Electronics Technology Co, Ltd.
ndizvomumwe wehunyanzvi mugadziri kubva Donguan, Guangdong, China. Tine makore anopfuura makumi maviri nematatu epasi rese OEM uye ODM yekugadzira sevhisi ruzivo pane isina waya & wired Mahedhifoni uye mahedhifoni.
Kubva pakagadzwa muna1998, isu takanangana nekugadzira, kugadzira, uye kushambadzira mhando dzemhando yepamusoro dzisina waya uye nharembozha nemahedhifoni. Ikozvino, yedu hombe chigadzirwa akateedzera ari anoshanda ruzha kudzima mahedhifoni, echokwadi asina waya stereo maearifoni, maviri maikorofoni ekutamba mahedhifoni, asina waya mahedhifoni, asina waya emitambo mahedhifoni uye wired nhare.
Mune yedu 6000 mita metres saizi uye yakashongedzwa zvakakwana fekitori, kune masere akashongedzerwa zvakanaka mitsara. Mune zvese, isu tine vanopfuura zana nemakumi maviri vane hunyanzvi uye vane ruzivo vashandi. Iyo yezuva nezuva yekugona inokwana inosvika 5000-8000 pcs. Kunze kwezvo, isu tine timu yeR & D yehunyanzvi yezvigadzirwa zvekutanga uye zvekugadzira zvitsva, zvinosanganisira mainjiniya e3D, mainjiniya emagetsi, mainjiniya eacoustic, ekugadzira magiraidhi nezvimwe.
Kune ese zvigadzirwa kubva kufekitori yedu, anonyatso kuongororwa nechikwata chedu zvichibva pakuvimbika nekuchengetedza zviyero mune yakajairwa kuvimbika kuyedza lab, uye kune mazhinji ezvigadzirwa, ivo vane CE, ROHS, Reach, FCC, Ruzha kumanikidza, KC uye mimwe mishumo yekuyedza kana zvitupa.
Chinangwa chedu ndechekuve wako mukuru wenguva refu wepasirese wekudyidzana naye kupa zvigadzirwa zvikuru nemasevhisi. Kusvika parizvino, tanga tichitendeseka uye nehunyanzvi tichipa zvigadzirwa zvepakutanga, zvekugadzira, uye zvemhando yepamusoro uye zvinogutsa zvevatengi zvinogutsa kune vatengi vanopfuura zana vanobva munyika dzinopfuura 87 nenzvimbo dzakasiyana.